Muslimiinta Mareykanka oo cabasho ka muujiyay qorshe ay dowladdu wado - BBC Somali
Muslimiinta Mareykanka oo cabasho ka muujiyay qorshe ay dowladdu wado
7 Agoosto 2015
Qaar ka mid ah bulshada Muslimiinta ah ee magaalooyinka Los angels, Bostan iyo Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay qabteen shir jiraa'id oo ay ku soo bandhigeen cabasho ku aadan barnaamij ay sheegeen in dawladu ay soo wado oo ay ku bartilmaameedsanayso dadka Muslimiinta ah.
Barnaamijkaasi oo la yiraado ladagaalanka xagjirnimada gacan ka hadalka leh ee loo soo gaabiyo CVA.
Haddaba weriyaha BBCda ee magaalada Minneapolis, Maxamed Xaaji Xuseen, ayaa waxa uu ka qeyb galay shirka jaraa'id ee ka dhacay magaaladaasi, waxa uuna wareystay qaar ka mid ah dadkii halkaasi hadalada ka jeediyay oo kala ah; Jaylaani Xuseen gudoomiyaha hay'adda u dooda xuquuqda Muslimiinta Mareykana ee Minnesota, Sadiiq Warfaa gudoomiyaha qurba joogta Soomaalida caalamka xafiiskeeda waqooyiga Ameerika iyo Xasan Maxamuud Imaamka Al-dacwa ee magaalada St. Paul.
Waxaanu ku hormaray Jaylaani oo uu waydiiyay bal waxa ay uga danleeyihiin shirkan jaraaid.